Fetiben’ny Bilaogy: Meksika – Ny Fampahalalam-Baovaon’Olon-tsotra Eny An-tsehatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2011 11:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, srpski, عربي, Español
Anatin'ity ampahany faharoa amin'ny famintinana ny Fetiben'ny Bilaogy: Meksika – Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy ity no atolotray ireo lahatsoratra izay miresaka ny fampiasàna ny aterineto amin'ity sehatry ny herisetra ity. Noresahan'ireo bilaogera betsaka ny momba ny anjara toerana raisin'ny aterineto amin'ny fiainam-piarahamonina ankehitriny, ary ireo olana mavesa-danja toy ny fisian'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra. Hàka ny toeran'ny mpitatitra vaovao nentin-drazana ve ny fampahalalam-baovaon'olo-tsotra? Mitaingina eo amboniny sa mba miantraika amin'ny tena iainana ao amin'ny fiarahamonina izy io? Ireny fanontaniana ireny no mitarika ireo bilaogera handray ny aterineto ho toy ny zo fototra sy antony iray mampahery ary mampiditra làlana hiantohana ny fahalalaham-pitenenana.
Ireo bilaogera dia nihevitra fa ny fifandraisana misy eo amin'ny herisetra, ny maha-olom-pirenena ary ny bilaogy, tsy avy amin'ny fijerena ny aterineto fotsiny; fa koa amin'ny maha-media azy manontolo. Amin'izao fotoana ny vaovao dia tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe zo hanjifa vaovao, fa efa tsapan'ny olona izao hoe ilaina ny fahafahana mamokatra sy mifampizara votoatin-javatra. Azontsika amafisina fa mbola misy ny fifanenjanana eo amin'ny tatitra ‘ofisialy’ sy ny ‘avy amin'olon-tsotra’.
Atsaharo ny fandatsahan-drà. Avy amin'ilay mpampiasa Flickr, otromundoesposible_com (CC BY 2.0).
Ireo olon-tsotra mpitatitra eny amperin'asa
Ohatra tsara amin'ny fifanenjanana voalaza etsy aloha ny fandinihan'i Miguel Ángel Guevara ny fandrakofan'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra ny herisetra ao anatin'ity lahatsorany ity “La eterna primavera” [es] (Ilay lohataona mandrakizay) avy ao amin'ny bilaoginy mit liv:
Tsy iombonako ny hevitra hoe hanivana ny vaovao, saingy heveriko mihitsy kosa fa tokony hanao ny asany amin'ny fomba tena matihanina ny media. Toy inona no ho fiantraikany amin'ny ankizy tsy mihaino afa-tsy tatitra mikasika herisetra mandritra ny fotoana maharitra? Manefy olombelona mahery setra hatrany amin'ny voaloham-piainany ve isika? Mandeha lavidavitra kokoa mihoatra ny tsipika efa ntaolo ben'ny fahalalahana maneho hevitra ny fandrakofan'ny media, miakatra amboniin'ny maha-olombelona ary manapak'aina ny korinam-piarahamonina. Tokony hitaky fandrakofam-baovao madio kokoa sy tsy mitanila ny vahoaka. Azontsika atao izany amin'ny alalan'ny fifampizaràna fahaiza-manao, fifampahafantàrana ary fifandrindràna isika samy isika, mba hiatrehana ireo manampahefana.
Jorge Escudero Villa ao amin'ny bilaoginy Óbice writes [es] mikasika ny fikarohana ny marina sy ny lanjan'izany amin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra:
Mba hahitàna ny marina, na izay manakaiky kokoa ny maha-olombelona ao anatin'ilay izy, ilaina ny fahafahana mifampiresaka momba ny singa rehetra manan-danja, ahafahan'ny tsirairay miteny, na lahy na vavy, mikasika ny olana ka mifampizàra fomba fijery. Io no antony maha-fitaovana sarobidy ny bilaogy. Ao anatin'io sehatra io, voalaza amin'ny ambangovangony anaty andàlana vitsy, izay ahitantsika tantara tsy notaterina tamin'ireo media “tranainy” na tsy marina mihitsy ara-politika; izy ireny amin'ny ankapobeny dia fitaratry ny fiarahamonina, izay mikendry, miaraka amin'ny teny matetika nosoratana tamin'ny rà, hanasitrana antsika amin'ireo hirifiry lalina sy mitohy mahazo antsika, hirifiry izay tsy tokony mihitsy hanjary ho fahazàrana.
Enrique Figueroa Anaya avy amin'ny Asfalto Tecnicolor dia manontany hoe “Karazana firenena toy inona no arafitsika ho an'ireo Meksikana rahatrizay izay hiaina ao anatiny?” sady miady hevitra [es] amin'ny fampiasàna ny bilaogy:
Tsy milaza ny hanova ny tontolo aho, na milaza ho mpanao revolisiona avy eo am-pandriako ka manandratra fotsiny ny feoko amin'ny alalan'ny Twitter sy ny fitorahana bilaogy ary avy eo miverina mijery fahitalavitra sy very ao anatin'ny fanarahana ny lalao fiadiana izay ho tompondaka amin'ny baolina kitra fotsiny (eny, mijery baolina aho, mba manan-jo hiala kely amin'ny rotorotom-piainana isanandro aho). Olon-tsotra ihany aho, miezaka amin'ny alalan'ny ataoko isanandro mba mitondra tontolo tsaratsara kokoa ho an'ny tsirairay manodidina ahy, ary manokana fotoana mba hisainana izay manosika antsika hanome ny kely avy amintsika ka amin'ny ankapobeny dia mba afaka manampy ny firenentsika hisondrotra. Satria, na dia ireo revolisiona lehibe indrindra aza dia matetika no deraina noho ny monkon-dohany sy ny fahaiza-mitarik'izy ireny, ary amin'ny farany, araka ny tantara, ireo tsy nitonona anarana miaraka amin'ny asa kely nefaintsika no nanoratra ny fanovàna.
Saingy rehefa miresaka momba ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra isika, tsy miresaka fotsiny mikasika ny bilaogy. Ernesto Priego dia mampahatsiahy antsika momba izay ao anatin'ity lahatsoratra ity “On Hero Reports and Civic Media” [es] (momba Ireo Tatitry ny Mahery Fo sy ny Mediam-bahoaka), navoakan'ny #SinLugar:
Ny fotoana tena namirapiratan'ity tetikasa ity (MIT Centre for Civic Media) dia ny fametrahana azy tao amin'ny Ciudad Juárez, ary fantatra tsara amin'ny teny espaniola hoe Crónicas de héroes [es] (Fitanisàna Ireo Mahery Fo). Tamin'ny alalan'ny fanentanana ho an'ny be sy ny maro nalefa onjam-peo, ny andiany notarihan'i Yesica Guerra, miasa miaraka amin'ny Tec Milenio, Tec. of Monterrey Juárez, IADA, Preparatoria Allende, Uniendo Esfuerzos por Juárez (Uniting Forces for Juarez), dia nandrisika ny olon-tsotra handefa tatitra momba ny tranganà “herimpon'olon-tsotra”, ka hanome ny toerana nisiany sy hijery izany anatinà sarintany azo kitihana.
Ary dia i Yesica Guerra indrindra koa, izay avy amin'ny bilaoginy ihany ao amin'ny Center for Civic Media (Foibe ho an'ny Fampahalalam-Baovaon'Olon-tsotra) no miteny amintsika fa ny Crónicas de héroes [es] dia hiakatra zana-tohatra iray ato ho ato:
Amin'izao fotoana, ny CRÓNICAS DE HÉROES dia mitrandraka kianja vaovao, mitetika ny hanomboka tetikasa iarahanà firenena roa amin'iny sisintany Etazonia/Meksika iny, hanandrana hampiray tanàna ho mpirahavavy any amin'ireo faritra ireo. […] Ny fifanolanana misy amin'izao fotoana any amin'ireo tanàna Meksikana sy ny fiparitadritahan'ireo tanàna mpirahavavy manamorona ny sisintany dia zavatra tsy tokony ho tsinontsinoavina. Na izany aza, ny tsy fifantohana afa-tsy amin'izay miiba sy zavatra ratsy miseho any amin'ireny faritra ireny, dia misintona ny ezaka andavanandro ataon'ny olon-tsotra hifotetaka amin'ny tany, ary dia voasakantsakana ny mety ho vokatra miabo tokony hisy.
Ao anatin'ilay bilaogy malaza Vivir México, Ismael Flores dia mampahafantatra [es] fandraisana andraikitra hafa avy amin'olon-tsotra mifandraika amin'ny resaka fanaovana gazety sy ny mpifindra monina:
Ao amin'ny La Plaza — bilaogy iray ao amin'ny vohikalan'ny Los Angeles Times —, mpanao gazety samihafa no nandray anjara tamin'ny alalanà lahatsoratra fandalinana sy fanehoan-kevitra […] Toa an'i Daniel Hernández, izay ny lahatsorany Internal migration flows below the radar in Mexico […] , na ny fifindra-monina anatiny eo ambany fanaraha-mason'i Meksika, dia mijery ny fifindra-monina anatiny ato amin'ny firenena avy amin'ny fomba fijery miainga ao an-tanànan'i Querétaro. […] Mexodus, (es) tetikasam-piaraha-miasa amin'ny fanaovana gazety iarahan'ny Anjerimanontolo avy any Amerika Avaratra sy Meksika. Avy amin'ny alalan'io tetikasa io, mpianatra ho mpanao gazety avy amin'ny lafin-tany roa amin'ilay sisintany no nandray an-tànana manokana hanadihady ny fifindra-moninà fianakaviana iray manontolo avy any Ciudad Juárez mankany Etazonia na fanjakana hafa azo antoka kokoa any Meksika — toa an'i Querétaro.
Mariel García Montes avy amin'ny bilaogy Thought Experiment #45,730,944 dia mampahatsiahy antsika ny fomba hafa ampiasàn'ny olon-tsotra ny mediam-bahoaka ao anatin'ilay lahatsoratra hoe Los “tweets” que arruinaron la fiesta [es] (Ireo”bitsika” nanimba ny fety)::
Ny 15 sy 16 Septambra , Meksika dia nankalàza ny faha-200 taona nanombohan'ny adim-panafahany […] Any amin'ny sekoly ambaratonga fototra, rehefa ankizy Meksikana ianao, dia mianatra ny hirehareha amin'ny fanànana an'i Meksika, noho ny fahaiza-mandrindra sy fanatanterahany ny adim-panafahana nialàna tamin'i Espana. Mahaleotena i Meksika. Mahaleotena ianao. Mihinàna! Mankalazà! [es] […] Raha eo am-pamakiana ity ianao, […] dia any misy tanàna iray izay mitety ny tambajotra ny vahoaka ao mba hitrandraka vaovao mikasika ny fifampitifirana talohan'ny niaingàny handeha hiasa, mba hamantatra ny làlana tokony hosorohana. Ho an'ireny olona ireny, tsy zava-dehibe ny 200 taona “satria fotsiny hoe”. […] Raha manaraka akaiky ireo famoahana aty anaty aterineto ianao mikasika io fankalazàna io, dia handre fisaintsainana an'arivony izay manaraka ny isa-minitran'ilay fety. Tokony hankalàza izany ve isika amin'ity taona izay naha-faratampony ny rà latsaka noho ny ady ifanaovana amin'ny mpikirakira zava-mahadomelina ity? Ho anaty fitoniana ve ny fankalazàna, amin'izao fotoana izay efa fantatsika izao fa iomanan-dry zareo narco hanafika ny olon-tsotra ho valin-kafatra ho an'ny governemanta? […] “Tsy misy na inona na inona tokony hankalazaina”
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Noho ny halavan'ity lahatsoratra ity, ary mba hanamora ny famakianareo azy, dia nanapa-kevitra izahay ny hamoaka azy anaty lahatsoratra maromaro. Ato ny famoahana voalohany , ity kosa ny faharoa, ary tsy ho ela no hamoahanay ny fahatelo.